Clamps maka ewu njikọ
ịbịaru ọnụ ọgụgụ 1: 0.5 1 2 3 4 5 6
Dayameta nke anwụrụ D
Dayameta nke stud B
Eriri ogologo H
Ịgbakọ size nke ụlọ mwekota
D - Dayameta nke anwụrụ
B - Dayameta nke stud
H - Eriri ogologo
Z - Nwechapụ
Buy Owuwu ngwaike abụghị nsogbu. Ahịa nwere fasteners maka ihe ọ bụla idaha. Anwụrụ clamps, clamps maka idozi nke dị iche iche nke na-aga. Ma, mgbe ụfọdụ, e nwere ike ọ gaghị abụ na ụlọ ahịa nfiksi na ị chọrọ ime ka mwekota onwe gị.
The olu akwa mejupụtara a threaded stud na akụ na clamping efere. Hairpin bends na anwụrụ dayameta na a metal clip dị njikere. Na nrụgide efere gwutere mmanụ abụọ oghere. Ọ na-etinye on a pin na presses megide pipe dị ka mwekota. -Eji na-ewu fences, ebe efere mmasị crossbar.